Wadashaqayn - SmartMe
Dom » iskaashi
La shaqee SmartMe!
Waxaad nagala shaqeyn kartaa siyaabo badan oo kaladuwan. Baro dhammaantood!
Galitaanka la kafaala qaaday
Qayb ka noqo SmartMe. Diyaarso qoraalka ama diyaar ha noogu ahaato. Waxaa lagu daabici doonaa nooca aad dooratay - Wararka, Hagaha, Safka.
Noqo kaaliyahayaga fiidiyowga oo ku dhiirrigel shirkaddaada kanaalkeena. Inta lagu gudajiray wadashaqeynta, waxaan soo bandhigi doonnaa agabyadaada (tusaale ahaan, astaamaha animated) kahor iyo isla markiiba kadib agabkeena fiidiyowga.
Ku dhaji xayeysiintaada websaydhka isla markaana aad uhesho isticmaaleyaal badan. Bananooyinka xayeysiinta ayaa loo habeyn doonaa si ay ugu fududaato inay u muuqdaan isticmaaleyaasha qaab aan caqabad ku jirin.
Waxaad nasiineysaa badeecadaada waxaanan u abuurnay dib u eegis qalabka lagu sameeyo xiriiriye bogaggaaga ama dukaankaaga. Dib-u-fiirinta waxaa lagu diyaarin karaa labadaba qoraalka iyo muuqaalka.
Hadaad ubaahantahay baahin balaadhan, xayeysiis balaadhan oo kahadlaya dhamaan kanaalkayaga, anaga ayaa ilaalinay. Waxaan kuu diyaarin doonnaa dalab ku habboon baahidaada.
La kulan soo saarayaasha iyo naqshadaha gudaha ee horeyba noola shaqeynayay!
Waan ognahay waxa aan qoreyno iyo sida aan kugula talineyno. Hubi shahaadooyinkayaga!